Umbala weTerkotta: kunye nantoni edibeneyo kwiingubo nangaphakathi
Umbala weTerkotta kwiingubo
Ukusebenzisa umbala we-terracotta kwiingubo, musa ukulibala malunga neempawu zayo ezahlukileyo. Ngoko, enye inkcazo enomdla waloo mbala kwiingubo okanye i-accessory iya kubelwa yintombazana enomsindo omnyama. Abanikazi beenwele ezibomvu zeentloko banokuzicoca ngokupheleleyo kulo mbala obushushu obushushu obushushu obushushu, bembethe ingubo okanye isambatho se-terracotta, befake into elula.
Akukho mbala ngaphezu kokumhlophe, ngokukodwa, ijikelezwe ngamanye amathoni. Oku kunceda ekudalweni lonke uluhlu lwembala: i-terracotta kunye nomhlophe. Ngokulula kunye nesebenzayo kwi-duet iza kujonga ihembe okanye i-blouse ngokugqibeleleyo emhlophe kunye ne-terracotta. Lo mfanekiso ubonakala ukhulu.
Terracotta kunye nekhofi
Imibala esondeleyo kwinqanaba kufuneka ikhethwe ngokucophelela ukuze ingabonakali njenge-speck monochromatic. Xa sithetha ngokudibanisa i-terracotta kunye neentyantyambo ze-burgundy, akunakuzesaba. Isiphumo ngumfanekiso okhangayo, othembisayo kunye nozukileyo.
Terracotta kunye nekhofi. Bahlala bedidekile. Nangona kunjalo, inhlanganisela emangalisayo yale mibala iya kudala ingubo engacasuli abanye. Olu luhlu lweentlobo eziphezulu kunye nezantsi, imibala eguquguqukayo ibe ngumbala omnene webhotela okanye i-vanilla ukusuka kwiphumo lekhofi nobisi.
Ukuba uthe wongeza iitoni ze-beige kwi-terracotta, i-terracotta iya kubonakala ibe mnyama, kwaye i-duo ephumela kumbala iya kuba mnandi.
Umxube nomthunzi we-coral-pink uzonika i-terracotta ukutsha, ukukhanya kunye nokuthoba.
Ukubona indlela umbala we-terracotta kwiingubo ubheka ngayo inhlanganisela engenhla, unakho kwisithombe.
Umbala weTerkotta ngaphakathi
Njengoko umkhuba ubonisa, kusemgangathweni wokukhetha imibala umntu achitha ixesha elide, ngenxa yokuba esi sigqibo isakhiwo kunye nomlingiswa wegumbi liya kuxhomekeka. Umbala weTerracotta ngaphakathi ungathanda ukuba, ukuba ufuna indawo enelanga kunye nenjabulo enokukwenza udlale ngemibala emitsha nayiphi na indawo.
I-palletta ye-terracotta ibandakanya yonke i-shades yemvelo emdaka: umnyama omnyama, isitena, isanqante, i-orange. Zibukeka zihambelana neetel ze-pastel. Namhlanje, umbala we-terracotta ngaphakathi ungabonwa njengefestile, yingakho abaqulunqi bezityalo ezahlukeneyo batusa ukuba basebenzise ukuhlaziywa kwamacandelo ahlukeneyo.
Ukuze ufumane ukhetho olungqambileyo kwaye uyinqobe, jonga ingcebiso kubaqulunqi malunga nokuhlanganiswa kombala we-tarakiti kunye nabanye.
Ukuba ukhetha umbala ogqamile we-terracotta, ngoko kufuneka usetyenziswe umda. Ngokomzekelo, lungiselela ngoncedo lwakhe ekamelweni: iintyatyambo ze-terracotta kwi-vase okanye ezinye iifenitshala. Umthunzi othuthuzelayo kwaye unomthi onokuthi ungakhokelela kwindawo enkulu. Imibala enjalo ingathatha indawo ephezulu ngaphakathi. Umzekelo, ungakhetha iphepha lodonga. Zilungelelene kunye neentyantyambo ezimhlophe, ezimhlophe kunye ne-beige. Isisombululo sesimanje nesisisiqalo sichasene ne-terracotta ebomvu okanye emnyama. Gcwalisa igumbi kunye nokukhanya okukhethiweyo kunye nokuhluma kwayo kuya kuvumela ukudibanisa kwayo kunye nohlaza okanye okwesibhakabhaka.
Umbala weTerracotta ulungelelaniso lweendlela ezahlukeneyo: ukusuka kwii-classic ukuya kwi-avant-garde.
I-Terracotta ayikho into ebonwa njengombala, ilungele ukubonwa kwemiboniso, ngoko ingasetyenziswa ngaphandle kokungabaza ukuhlobisa kwangaphakathi okanye igqoke kwiingubo. Amathuba okudibanisa kunye ne-tracotta tints ayinakucingelwa yimimiselo enikwe. Xa ukhetha izihlanganisi ezihambelanayo, zithembele kwi-intuition yakho kunye neengqondo. Ungesabi ukuzama, kwaye uya kuphumelela.
Eyona ntloko yintloko: ekwindla - ebusika 2016-2017
Uhambo lwehlobo: i-culottes-umendo-2016
9 iingubo eziphathekayo kunye neengubo zeli kwindla nobusika
UMikhail Terekhin ulungele ukuqhubeka nobudlelwane noKsenia Borodina
Viennese Ingulube Schnitzel
I-roll lavash ne-suluguni ushizi
Isaladi kunye neesitidi kunye noshizi